Mihobia amin'ny taona vaovao any Sipra miaraka amin'ity tolotra mahafinaritra ity | Vaovao momba ny dia
Betsaka ny olona misafidy ny hisafidy toerana haleha tongasoa ny taona vaovao. Satria fomba iray ahafahana manao zavatra am-boalohany kokoa amin'ny daty toa ireto. Raha mieritreritra ny dia nataonao nofinofinao hatrizay ianao dia hanampy anao amin'ny hevitra tsy lavorary kokoa izahay. Maneno amin'ny taona vaovao any Sipra!
Ho hitanao eo izay rehetra ilainao hanombohana taona vaovao amin'ny tongotra ankavanana. Miloka amin'ny fety fa amin'ny fitsangatsanganana ara-kolontsaina indrindra koa. Cocktail tonga lafatra izay efa nofinofisinao hatry ny ela. Discover ny tolotra lehibe izay nofidinay ho anao.
1 Manolora haneno amin'ny taona vaovao any Sipra
2 Ny zavatra ho hita sy hatao any Sipra mandritra ny Krismasy
2.1 Indray andro dia manao ski ambony any Sipra
2.2 Kastan'i Kolossi
2.4 Castle of San Hilarion
Manolora haneno amin'ny taona vaovao any Sipra
Indraindray mila mandositra fotoana toa izao isika. Saingy tsy midika izany fa tokony hiala amin'ny fanahin'ny Krismasy isika, ny mifanohitra amin'izay no izy. Afaka manohy mankalaza ny fotoana isika fa amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao. Amin'ity tranga ity dia nifidy an'i Sipra izahay satria any no hahitanay izay rehetra ilainay hanombohana amin'ny dingana tsara indrindra. Ka ahoana ny hevitrao mandany telo andro amin'ny toerana toy izao ary ho kely noho izay antenainao.
Fanolorana izany samy tafiditra ny sidina na ny fijanonana. Ny voalohany amin'izy ireo dia manana ny fiaingany amin'ny faha-30 avy any Madrid. Raha ny fiverenana dia amin'ny 2 Janoary. Ho fanampin'izay, tsy maintsy tsiahivina fa ao anatin'ny vidiny dia misy valizy voamarina. Ny trano fandraisam-bahiny voafidy dia ny 'Kapetanios Odyssia' izay misy trano fisakafoanana roa, efitrano misy lavarangana, dobo filomanosana ary sauna. Ho fanampin'izay dia tena misy toerana izy satria 4 kilometatra monja avy eo afovoany. Mazava ho azy, ireo toetra tsara rehetra ireo, hieritreritra ianao fa mampitombo ny vidiny, saingy tsia. Amin'ity tranga ity, ny sidina sy ny fijanonana mandritra ireo telo andro ireo, miaraka amin'ny sakafo maraina, dia manana vidiny 647 euro. Tsy izany ve no hevitra tsara? Raha izany dia azonao atao ny mamandrika azy amin'ny Minitra farany.
Ny zavatra ho hita sy hatao any Sipra mandritra ny Krismasy
Tsy misy isalasalana fa iray amin'ireo toerana itiavanao azy io amin'ny fahitana voalohany. dia nosy mediterania manana hatsarana tokana izy io izay ahitana ny taolam-biby arkeolojika ary koa ny morontsiraka paradisaatika indrindra. Ny lovantsofina dia milaza fa io no toerana nahaterahan'i Aphrodite, noho izany, mifototra amin'izany dia efa fantatsika fa zavatra tena miavaka izy io.
Indray andro dia manao ski ambony any Sipra
Rehefa tonga amin'ny faha-30 isika dia mbola hanana ny marain'ny 31 mba hahafahana manao karazana hetsika. Ny iray amin'ireo malaza indrindra amin'ity faritra ity dia ny ski. Ho an'ity dia manana ny Mount Olympus, izay hahagaga anao amin'ny haavony 1952 metatra, izay iray amin'ireo manintona indrindra an'io toerana io. Misy dian-tongotra 6, samy hafa ny halavany sy ny fahasarotany. Manomboka eto dia hanana fomba fijery tonga lafatra mankany amin'ny saikinosy Akrotiri na ny Salt Lake ianao.
Ny lapa dia naorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary ankehitriny sisin'ny Limassol. Manana tilikambo lehibe izy izay 20 metatra mahery ny haavony. Avy aiza no ahitantsika fomba fijery mahavariana momba izay rehetra manodidina azy. Fitsangatsanganana miverina amin'ny fotoana izay mendrika ny hiampitana.
Iray amin'ireo toerana arkeolojika malaza indrindra ity. Tsy isalasalana fa eo am-pototry ny hantsana no misy azy, ka mandeha tsy miteny fa manaitra ny fomba fijery. Ao no ahitantsika mosaic voatahiry tsara ary koa ny faritra teatra ary koa ny Trano Eustolios.
Castle of San Hilarion
Ao amin'ity lapa ity mirongatra ny angano miadana. Ny iray amin'izy ireo dia ny mpanjakavavin'ny matoatoa, izay tia io toerana io no nanorina azy. Izy io dia manana fomba fijery manaitra, voahodidin'ny rindrina sy ny faritra toa nalaina avy tao an-tendrombohitra.
La Saikinosy Karpas teboka iray hafa tokony horaisina. Na tsara ny toetrandro na tsia, tsy azontsika hadino ireo morontsiraka volamena manodidina azy. Na dia tsy iray amin'ireo faritra be mpitsidika indrindra aza izy io, dia marina fa manana zorony majika ihany koa izy, tanàna manan-tantara toa an'i Dipkarpaz na ny fiangonan'i Agios Filon.
Na aiza na aiza no itodihanao, mahatalanjona ny toerana rehetra. Amin'izay mba Troodos tsy lavitra eo aoriana. Ny fiangonana ary koa ny monasitera dia manome satroboninahitra azy. Ankoatr'izay, miaraka amina sary hosodoko marobe mahazatra amin'ny vanim-potoana medieval izay ilaina foana ny mahita. Araka ny hitanao dia mety ho Krismasy mahery vaika kokoa noho ny antenainao ary ao anatin'ny telo andro fotsiny. Fa raha mandamina ny tenanao ianao dia azo antoka fa ho afaka mankafy an'izany rehetra izany sy bebe kokoa. Maneno amin'ny taona vaovao any Sipra!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » tolotra » Miantso amin'ny taona vaovao any Sipra
Inona no ho hita any amin'ny Balkans